Ukukhishwa Kwencwadi! URenée Pawlish: AmaNefili, uGenesise Wobubi | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 23, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Iminyaka emibili nohhafu ngisebenze noRenée enkampanini ye-Newspaper Database Marketing eDenver, eColorado. Njengabasebenzi abaningi abanethalente, uRenée wayenezindawo zokuqamba ezazingishiya ngingasasebenzi. Ngaba nenhlanhla futhi ngajabula lapho ngifunda imibhalo yencwadi yokuqala eyimfihlo kaRenée yokubulala. Kwakuyinto efundekayo, emnandi futhi engalindelekile!
URenée uvele wangibhalela wangitshela ukuthi usanda kwethula incwadi yakhe elandelayo, amaNefili uGenesise Wobubi. Nayi incazelo:
Amandla amnyama achazwe kuGenesise abuyela edolobheni elincane elisezintabeni iTaylor Crossing. Ngemuva kokubona ubukhona obubi eNew York City, uRory Callahan uphuma eNtshonalanga eyofuna izimpendulo, futhi uthola idolobha linqotshwa amandla angaphezu kwawemvelo. Manje, ukuprofetha okubi kungagcwaliseka ngamaNefili.
Okokuqala, sihalalisela uRenée! Okulandelayo… kubo bonke abafundi abanentshisekelo lapho, qiniseka ukuthi uthola ikhophi! Kuze kube manje, ukubuyekezwa kumnandi ku-Amazon futhi amakhophi ahamba ngokushesha! Kepha mina… Ngizothumela ikhophi yami kuRenée ukuze ngiyibhalele i-autograph! Noma ngabe ungumlandeli kaBronco.